दिनेश गौतम काठमाडौं, २० असार
कस्तो मेरो बिगार्‍यो दिमाग
नरोऊ मायालु... !
करिममै नभा’को कुरा
बल गरेर हुँदैन हजुर
यो कालजयी गीत अहिले पनि आममानिसको मन-मष्तिस्कमा गुञ्जिरहन्छ । यो अमर गीतको सुमधुर आवाज बीमाकुमारी दुराको हो । दुरालाई यस गीतमा साथ दिएका छन्, प्रवीण गुरुङले ।
बीमाका ६ हजारभन्दा बढी लोक गीत रेकर्ड भइसकेका छन् । अजम्बरी भाकाहरू पस्किएकी दुरा नेपाली लोक सङ्गीत आकाशकी चम्किली तारा हुन् । पाखा-पखेरा, कुना-कन्दरा, सुख-दुःखका शब्दलाई टपक्क टिपेर गीत गाउने दुराको जीवन पनि उनैले गाएका गीत जस्तै बगेको छ ।
लमजुङको दुराडाँडामा २०२८ सालमा बुबा दलबहादुर र आमा शन्तमायाबाट जन्मिएकी हुन् बीमा । वन, जंगल, डाँडाकाँडा, उकाली-ओराली, मेलापात, खेती-किसानी गर्दै उनको बाल्यकाल बित्यो ।
त्यसबेला हिँडेर नै ओहोरदोहोर गर्नुपथ्र्यो । बस चलेको थिएन । अहिले आँगनमै बस पुग्छ । ‘रमाइलो पहिलेको थियो, सजिलो अहिलेको छ’, उनी बाल्यकाललाई स्मरण गर्छिन् ।
विद्यालयमा पढ्न पाइनन्
त्यसबेला छोरीहरूलाई पढाउने चलन थिएन तर उनले पढ्न नपाउनुको कारण भने बेग्लै थियो । ठूलो परिवार । बुबाहरू छुट्टिएपछि भाइबहिनीको रेखदेख गर्ने काम उनको काँधमा आयो । भाइबहिनी हेर्नुपर्ने भएकाले उनका लागि विद्यालयका ढोका बन्द भए ।
अँगेनो नै विद्यालय, शिक्षक बुबा
विद्यालय जान नपाएपछि औपचारिक शिक्षाबाट उनी बञ्चित भइन् । घरको अँगेनो नै उनको विद्यालय र बुबा शिक्षक बने । ‘खाना पकाउन अँगेनामा दाउरा बालिन्थ्यो । खाना खाएर जुठो लोटाएपछि चकटी ओछ्याएर अँगेनाको डिलमा बसेर आगो फुक्ने ढुङ्ग्रो र चिम्टाले खरानी समातेर कखरा लेख्न बुबाले सिकाउनुहुन्थ्यो’, उनी भन्छिन्, ‘यसरी कखरा लेख्न सिकेको दिन अहिले पनि याद आइरहन्छ । आकार, उकार अलिक नमिल्ला तर लेख्न सक्छु ।’
अनि मेला, पर्ममा गाउन थालिन्
बुबाआमा खेती-किसानी गर्ने । उनी पनि बुबाआमा सँगसँगै हुन्थिन् । वर्षभर खाने र गुजारा चलाउने आयस्रोत भनेकै खेती-किसानी नै थियो । बीमा पनि गाउँमा मेलापात, पर्म लगाउन जान्थिन् । धान, कोदो रोप्न जाँदा बीमा गीत गाउँथिन् ।
‘कति मीठो स्वर’ भनेर प्रशंसा पाउँथिन् । राम्रो स्वर भएको भनेर गाउँतिर उनको कुरा हुन्थ्यो । गउँमा विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिता कार्यक्रम हुँदा गाउने अवसर पाउँथिन् । ‘गाउँमा धान, कोदो रोप्दा दाइ दिदीहरूसँग गाउँथेँ । त्यहीँबाट गाउन सिकेकी हुँ’, उनी भन्छिन् ।
लाइभ दोहोरीमा प्रथम
गाउँ जिल्लामा दोहोरी प्रतियोगिता हुन्थ्यो । बीमाको स्वर राम्रो छ, राम्रो गाउँछे भनेर गाउँमा फैलियो । उनका हजुरबुबा प्रधानपञ्च थिए । जिल्लामा कर्यक्रम हुँदा ल्याउने-लैजाने गर्थेे ।
जिल्लास्तरीय लोकदोहोरी प्रतियोगितामा उनी प्रथम भइन् । जिल्ला प्रतियोगितामा प्रथम भएपछि देशभरबाट छानिएका टोलीबीच काठमाडौंमा प्रतिस्पर्धा हुने भयो । लमजुङको टोलीको प्रतिनिधित्व गर्दै उनी काठमाडौं आइन् ।
‘एउटा जिल्लाबाट एउटा टिम आएको थियो । ७५ जिल्लाको टोली थियो । मेरो टिम तेस्रो भयो’, उनी भन्छिन् ।
त्यसपछि रेडियो नेपाल
राष्ट्रिय लाइभ दोहोरी प्रतियोगितामा तेस्रो भएपछि उनका लागि रेडियो नेपालको ढोका खुला भयो । अहिले जस्तो बाहिर रेकर्डिङ स्टुडियो थिएन । रेडियो नेपालकै भरपर्नुपथ्र्यो । रेडियो नेपालको चौतारी, प्रतिभा, रोधी जस्ता कार्यक्रममा भाग लिइन् ।
रेडियो नेपालले गरेको प्रतियोगितामा पनि उनी प्रथम भइन् । रेडियो नेपालमा उनको स्वरको परीक्षण पनि भयो । त्यसपछि बीमाले गाउने अवसर बढी पाउन थालिन् ।
बीमाको पहिलो रेकर्डिङ भएको गीत ‘लाइछु माया अर्कैको नासो’ र एल्बमा भने ‘छोरीको जुनी’ हो । बीमाकुमारी दुरा भनेर चिनाउने गीत ‘निमपत्ता’, ‘छुट्यो मायाजाल’ र ‘चिनो’ हुन् । यी कर्णप्रिय गीतले बीमालाई निकै माथि पुर्‍याए ।
गीतमा पनि पर्म, पारिश्रमिक थिएन
सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने तर त्यतिबेला सबै कलाकारहरूले पर्म लगाएर गाउने गरेका थिए । बीमाले पनि धेरै गीत पर्म लगाएर गाएकी छन् । ‘पारिश्रमिक थिएन । पर्म लगाउने चलन थियो । दोहोरीमा एउटाले अर्काको गीत गाउने गरेका थियौँ । पारिश्रमिक लिने गरेको थिएन’, दुरा भन्छिन् ।
लाइभ दोहोरीबाट उनी चर्चाको शिखरमा पुगिन् । दोहोरीका लागि लमजुङदेखि पोखरा, पोखरादेखि काठमाडौंसम्म आएकी हुन् उनी । ‘हिँडेर लमजुङको दुराडाँडादेखि डुम्रेसम्म आएर बस चढेको याद छ’, उनी भन्छिन्, ‘२०४५ सालको कुरा हो । त्यतिबेला लमजुङदेखि ४५ रुपैयाँमा आएकी हुँ । काठमाडौंमा ३ मोहरमा गाडी चढेकी थिएँ ।’
दोहोरी कार्यक्रममा निम्तो आउन थाल्यो । कार्यक्रम भ्याई नभ्याई भएपछि उनी काठमाडौंमै बस्न थालिन् । गीत गाए पनि पारिश्रमिक थिएन । दाजु र मामाहरूसँगै बस्न थालिन् । कहिले दाजुसँग, कहिले मामासँग बसेर उनी गीत गाउन हिँड्थिन् ।
‘गीत गाए पनि त्यतिबेला पैसा थिएन । मामा, दाजु आर्मी भएकाले सजिलो भयो । आलोपालो गरेर बस्थेँ’, दुरा भन्छिन् ।
२०४७ सालदेखि उनी एक्लै बस्न थालिन् । देश, विदेशमा कार्यक्रममा जान थालिन् । गीतको क्यासेट बेचेर अलिअलि पैसा आउन थाल्यो । त्यही पैसाले उनले आफ्नो गुजारा चलाउन थालिन् ।
‘क्यासेट बेचेर उठेको पैसा चलाउँथेँ । स्टेज कार्यक्रम धेरै आउन थाले र श्रोताले धेरै रुचाउनुभयो । उहाँहरूको मायाले नै यो स्थानमा छु’, उनी भन्छिन् ।
‘लाइछु माया अर्कैको नासो’ उनको रेकर्ड भएको पहिलो गीत जस्तै छ उनको जीवन । बुबाआमाको सपना थियो, छोरीको राम्रोसँग विवाह गरिदिने तर गीत गाउँदै गर्दा उनको एक जनासँग प्रेम भयो ।
उनले आफैँले मनपराएको केटासँग २०५३ सालमा विवाह गरिन् । जोसँग विवाह गरिन्, ती अर्कैका नासो रहेछन् । उनले मायाको बदला धोका पाइन् । एउटी छोरी भएपछि उनी छुट्टिएर बसिन् ।
‘छोरीको विवाह राम्रोसँग गर्ने बुबाआमाको इच्छा थियो तर गीत गाउने क्रममा आफ्नै खुसीले गरेँ । एउटी छोरी छ । ममाथि धोका भयो । घर सफल हुन सकेन’, बीमा भन्छिन् ।
उनी श्रीमानको नाम पनि लिन चाहन्नन् । ‘मरिसकेको कुरा उठाउन चाहन्नँ । मेरो विगत खरानी भएर गइसक्यो । अहिले म खुसी छु’, बीमाको भनाइ छ ।
राजदरबारमा पनि गाइन्
राजदराबारमा प्रत्येक ६-६ महिनामा आर्मीले नाच देखाउने चलन थियो । नयाँ वर्षमा आर्मीका गण, गुल्म र वाहनीको प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । त्यसबाट उत्कृष्ट भएकाले राजपरिवारलाई गीत सुनाउने, नाच देखाउने गरिन्थ्यो ।
उनी पनि त्यसमा छनोट भएकी थिइन् । ‘दरबारभित्र कालीबहादुर गण र गोरख गण थिए । मलाई कालीबहादुर गणले छनोट गरेको थियो । २ वर्ष दरबारमा गएर गाएँ’, उनले दरबारमा गाएको अनुभव सुनाइन् ।
राजाको जुठो खाएको होइन
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको जुठो खाएको भनेर नभएको हल्ला गरिएको उनले दुखेसो गरिन् ।
‘दरबारमा कार्यक्रम सकिएपछि पार्टी हुन्थ्यो । त्यसमा राजाले जुठो हालेपछि खाने भन्ने चलन थियो । पहिले राजाले सुरु गरेपछि अरूले खाने भनेको हो त्यो भनेको । अहिले बीमाले राजाको जुठो खाइ भनेर युट्युबमा मेरो फोटो राखेर हालेका छन् । त्यो गलत हो । मैले जुठो खाएको होइन’, आफ्नाबारेमा गलत कुरा आएकामा उनको प्रष्टीकरण छ ।
युट्युबले गाह्रो बनायो
केही वर्ष भयो बीमाले आफ्नै गीत गाएकी छैनन् । अरूका गीतमा भने आवाज दिएकी छन् । ‘अहिले युट्युबको जमाना आयो । हाम्रो पालामा रेकर्ड गराएर लाखौँ क्यासेट बिक्री हुन्थ्यो । क्यासेट बेचेर पैसा हुन्थ्यो । अहिले ४-५ लाख खर्च गरेर भिडियो बनाएर युट्युबमा हाल्न गाह्रो भयो’, बीमा भन्छिन् ।
पारिश्रमिक तोकेकी छैनन्
उनको बाँच्ने आधार भनेको यही गीत-सङ्गीत नै हो । यसबाट नै उनले आफ्नो घर चलाउनुपर्छ । गीत गाउँदा यति नै चाहिन्छ भनेर रेट तोकेकी छैनन् उनले । बीमा भन्छिन्, ‘यति नै रेट भन्ने छैन । मान्छेको व्यवहार र समयअनुसार लिन्छु ।’
श्रोता र दर्शकको मायाले नै आफू बाँचेको उनी बताउँछिन् । ‘श्रोताले माया गरेकाले एक मुठी खान सजिलो भएको छ । धेरै माया पाएकी छु’, बीमा भन्छिन्, ‘म स्टेजमा कार्यक्रममा जाँदा पैसाको माला नै लिएर आउनुहुन्छ श्रोताले । कतिले सुन नै लिएर आउनुहुन्छ । उहाँहरूको माया नै मेरालागि ठूलो हो ।’
गीत-सङ्गीत के हो ? यसको परिभाषा व्यक्तिअनुसार फरकफरक आउँछ । बीमाको बुझाइमा गीत-सङ्गीत भनेको दुःख-सुखको साथी हो ।
‘दुःख-सुखलाई सहज बनाउने भनेको गीत हो’, उनी भन्छिन्, ‘अहिले कोरोनाको महामारी छ । अस्पतालमा हल्ला गर्नुहुँदैन भन्छौँ । ल हेर्नुहोस् त, कोरोना संक्रमितलाई गीत सुनाउने, क्वारेन्टाइनमा गीत बजाउने गरिएको छ । त्यसैले गीत-सङ्गीत दुःख-सुखको साथी हो । जुन बेलामा पनि यो महत्त्वपूर्ण छ ।’
पछिल्लो समय लोक गीत-सङ्गीत भड्किँदै गएकामा उनी चिन्तित छन् । ‘यस क्षेत्रमा काम गर्ने अग्रज दाजुदिदीहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूले पनि यस विषयमा आवाज उठाउनुभएको छ । हाम्रो लोक गीत-सङ्गीतलाई बिगार्नुहुँदैन’, उनी भन्छिन् ।
सङ्घर्ष नै जीवन
जीवन के हो ? यसको उत्तर पनि सहज छैन । उनी भन्छिन्, ‘जे भोगेर आइएको छ, त्यही हो जीवन । सफल हुन आफैँले बल गर्नुपर्छ । मैले बल नगरेको भए म गायिका बन्ने थिइनँ । कतै गाउँमा कसैकी बुहारी भएर खेतीपाती र मेला-पर्ममै जिन्दगी बित्ने थियो ।’ बीमा आँट गर्नुपर्छ, जीवन सहज हुन्छ भन्ने ठान्छिन् ।
श्रोताको मायाले यहाँसम्म आइपुगेको ठान्ने बीमाको अबको योजना दुखीको सेवा गर्ने छ । ‘सेवा गर्न धन नै चाहिन्छ भन्ने छैन । धन नभए पनि मन छ’, बीमा भन्छिन्, ‘दुःखमा परेकालाई धनले, तनले, मनले या गीत गाएर, के गरेर हुन्छ, सकेको सहयोग गर्छु ।’
एक पटक मरेर जानै पर्छ भन्ने बुझेकी बीमाको आग्रह छ, ‘दुखीलाई सहयोग गरौँ ।’
अमेरिकाले भन्दा राम्रो गरेका छौँ
संक्रमितले भरिए अस्पताल, घरघरमा संक्रमित, समुदाय जोखिममा